७ नम्बर मा चौथो बर्ष पुरै हिलो मुक्त वडा सडक बन्छ, भ्रष्टाचार शुन्य : वडा अध्यक्ष राजेन्द्र हमाल
शुक्रबार, ६ असार २०७६
“२० बर्ष भन्दा कम उमेरका बाबुनानीहरुको विवाह गर्ने संख्या बढेको हुँदा न्युनिकरणका लागी मधुवन नगरपालिका र वडाले पनि बजेटको ब्यवस्थापन गरी यसमा सक्रियताका साथ काम गर्ने योजना बनाई रहेको छ । यसका साथै हाम्रो बोर्डर एरिया भएकाले मानव बेचबिखन तथा लागु औषध, बाल श्रमका जोखिमहरु धेरै छ । एकै पटक शुन्यमा झार्न नसकिएता पनि विस्तारै प्रतिशतका आधारमा प्रभावकारिता बढ्दै जाने हो ।”
बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र हमालको सक्रियता बढ्दै गएको छ । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा, जनप्रतिनिधि भएर आईसकेपछि वडाको विकास निर्माण तथा अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यको प्रगति कति ? नगरप्रमुख गणेश बहादुर क्षेत्रि (कृष्ण) निकट मानिने वडा अध्यक्ष राजेन्द्र हमाल सँग पत्रकार भीम उचै ठकुरीले गर्नुभएको कुराकानी यस्तो छ ।
१. आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा, अहिले मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर ७ ले के–के गरि रहेको छ ? कति काम सम्पन्न गर्न सफल हुनुभयो ?
यो वडा नम्बर ७ भित्र चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा बिनीयोजित बजेट मध्ये हामीले बिकास निर्माणका एक सय प्रतिशत नै काम फछ्यौट गरेका छांै । लक्षित तर्फ अनाथ बालबालिका जसका आमा बुवा छैन्न । तिनको शिक्षाका लागी हामीले सहयोग प्रदान गरिसकेका छौं ।
८५ बर्षभन्दा माथी रहनुभएका वृद्धआमा, बुवाहरुका लागी सम्मान कार्यक्रम राखेका थियौं । ६० बर्ष उमेर पुगेर अवकास पाउनुभएका २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकालाई नगद तीस–तीस हजार रुपैयाँका दरले सम्मान गरेका छौं । त्यसैगरी हामीले शिक्षा तर्फ पनि लगानी गरेका छौं ।
सडक बाटोहरु पुर्ण रुपमा निर्माण गर्न सफल भएका छौं । मधुवनका ९ वटै वडामा ५५ लाख रुपैयाँ बजेट सिलीङ तोकेर तयार गरिएको थियो ।
२. उसो भए बजेट तपाईको वडामा शतप्रतिशत नै खर्च भएको छ त ?
हजुर, हाम्रो वडा नम्बर ७ मा शतप्रतिशत नै बजेट खर्च भएको छ ।
३. भनेपछि विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरी कति किलोमिटर ग्राबेल अथवा पक्की कालोपत्रे सडक बनाउनु भयो ?
हाम्रो वडा नम्बर ७ भित्र पक्की सडक भन्नुुहुन्छ भने कम्तीमा आधा किलोमिटर भित्र होला । पहिलो चरणमा हामीले ग्राबेललाई नै ध्यान दिएका छौं । ग्राबेल सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले ७ किलोमिटरको हाराहारीमा बिछउन सफल भएका छौं ।
४. अनि कच्ची सडक, पुल, कल्र्भट ?
अब यो पुर्नवासको बस्ती बसेको हुँदा खेरी यो पलानिङ क्षेत्र हो । बाटोघाटो खोल्नको लागी हामीलाई कुनै समस्या छैन । पर्याप्त मात्रामा चक्लाबन्दी बाटो छ । त्यसमा पनि करिब ७५ प्रतिशत बाटोहरु ग्राभेल भईसकेको छ ।
बाँकी रहेको २५ प्रतिशत बाटो छ, अब हामी तेस्रो बर्षको बजेट तयार गर्दै छौं । यसमा सम्बोधन हुन्छ, र चौथो बर्ष यहाँ पुरै हिलो मुक्त वडा सडक रहनेछ ।
५. पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ब्यापक जनगुनासो छ, तपाई एउटा युवा जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफनो वडामा भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागी कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
एकदम हजुरले उठाउनुभएको कुरा अहिले देशभरी चलिरहेको बिषय हो, मुल आधार भनेको हाम्रो मेयर साव हो, मेयर साव नै एउटा यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुदैन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारर्बाही गरिन्छ भन्ने किसिमको उहाँको जुन निर्देशन छ, जुन किसिमले उहाँ खट्नुभएको छ ।
उहाँ आफै पनि आफनो खल्तीको २ रुपैयाँ खर्च गरेर आम समुदायलाई सेवा गर्ने, लायक मेयर हामीले पाएका छौं । त्यसै अनुरुप उहाँको निर्देशन वडा नम्बर ७ अन्र्तगत मात्र नभएर मधुवन भरीकै ९ वटै वडामा भ्रष्टाचार चाँही जिरो छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको काम गराई शैली त्यो चाँही खास्सै नराम्रो छैन । जनप्रतिनिधिले पनि यही समाजको विकास गर्ने सेवा गर्ने हो, कर्मचारीले पनि यही देशको राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएर विकास र सेवा गर्नलाई आउनुभएको हुँदा हामी दुबैको एक सिक्काका दुई पाटाको आधारले काम अगाडि बढी रहेको छ ।
६. स्थानिय जनताहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाईरहनुभएको छ, उसो भए ?
जनताहरुको अपेक्षा भनेकै बिशेष गरी पहिले यो बाटोघाटो बनोस भन्ने छ । त्यो मात्र होइन, हाम्रो मधुवन नगरपालिकाले शिक्षामा फड्को मारेको छ ।
र बिशेष गरी अहिले हामीले हेर्दा खेरी मेयर साव एकदमै सक्रियताका साथ लाग्नुभएको छ, वडा अध्यक्षहरुलाई पनि सक्रिय बनाउदै लग्नुभएको छ ।
हामीले कार्यक्रमहरु पनि उहाँकै निर्देशन अनुसार अगाडि बढाई रहेका छौं ।
७. तपाईको वडा छिमेकी देश भारतको सिमा क्षेत्र सँग जोडिएको पनि छ, अपराधीक घटनाहरु रोक्न यहाँको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
अहिले बिशेष गरी बर्दियाका ८ तहमा विकास निर्माण लगायतका काममा अगाडि बढेयौं । तर मधुवनमा लागु औषधको अलिकति जोखिम देखिएको छ, यो टारर्गेट एरिया भएको हुँदा हाम्रो यसमा बिशेष जोड रहन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी लागु औषधलाई नियन्त्रण गर्न हामीले अब आउने बजेटमा प्राथामिकताका साथ बजेट ल्याउदै छौं ।
हाम्रो मेयर साव लगायत हामी सबै जनप्रतिनिधिको एउटा प्रतिबद्धता के छ भने, लागु औषधमा कोही पनि संलग्न हुनुहुन्छ भने कुनै पनि किसिमको सहयोग समर्थन गर्दैनौं । उहाँहरुलाई कानुन अनुसार कारर्बाही गर्ने गरी हामीले प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरिरहेका छौं ।
चालु आर्थिक बर्षको २०७५-०७६ मा पनि लागु औषध दुर्रब्यसनी सम्बम्धी सडक नाटक हाम्रो ७ नम्बर वडाका ४ वटा ठाउँहरुमा प्रर्दशन गरेका छौं ।
त्यसमा पनि बढि संम्बेदशिल क्षेत्र दशरथ बस्ती, धर्मबस्ती र गंगा बस्ती सगैं बोर्डर क्षेत्रलाई समेटेका छौं । आगामी दिनमा निरन्तरता दिने नै छौं । यसमा अभिभावक, दुर्रब्यवसी, प्रहरी प्रशासनको पनि उपस्थिती हुन्छ ।
८. अनि बाल विवाह, बाल श्रम लगायतका बालबालिका सम्बन्धी बिषय पनि छन ?
हामीले विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु पनि तयार पारेका छौं । यो बाल विवाह अत्याधिक बढेको अवस्था हो । २० बर्ष भन्दा कम उमेरका बाबुनानीहरुको विवाह गर्ने संख्या बढेको हुँदा न्युनिकरणका लागी मधुवन नगरपालिका र वडाले पनि बजेटको ब्यवस्थापन गरी यसमा सक्रियताका साथ काम गर्ने योजना बनाई रहेको छ ।
यसका साथै हाम्रो बोर्डर एरिया भएकाले मानव बेचबिखन तथा लागु औषध, बाल श्रमका जोखिमहरु धेरै छ । त्यसै कारण ११ नम्बरको सिमामा दलित महिला उत्थान संघलाई त्यहाँ खटाएर चेकजाँच, निगरानी गर्न भनेका छौं ।
भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग पनि हाम्रो राम्रो समन्वय भईरहेको छ । एकै पटक शुन्यमा झार्न नसकिएता पनि विस्तारै प्रतिशतका आधारमा प्रभावकारिता बढ्दै जाने हो ।
जस्तो २०७५ सालको लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानका क्रममा एक दर्जन बढीको संख्यामा ब्यक्तिहरु जेल चलान भएका छन । भने केहीलाई अहिले निगरानी गरिरहेका छौ, प्रयोगकर्ता, खरिद, विक्री गर्नेहरु यसमा परेका छन ।
९. बेरोजगारी समस्या समाधानको उपाय वडामा के कस्ता अपनाउनुभएको छ ?
यो प्रश्न एकदम सान्र्दभिक पनि छ । यो हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारकै कारण धेरै जना बैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ । अहिले नेपाल सरकारको जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भर्खरै मात्र आएको छ ।
अहिले हाम्रो नगरपालिका भित्र ४२ लाख रुपैयाँ भित्र रहेर बेरोजगार रहेका, ३ महिना सम्म मात्र खान पुग्ने, विपन्न त्यस्ता वर्गलाई काम दिई त्यस बापत पारिश्रमिक दिने भन्ने छ ।
यसले मात्र नगरपालिका, वडाको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको लागी ठुला उद्योग कलकारखाना, कृर्षि आधुनिकरण जस्ता कुराहरुलाई प्रत्येक स्थानिय तहलाई सेन्टर पर्ने गरी नेपाल सरकारले संञ्चालन गर्नु पर्छ, यसो गर्न सकियो भने यो बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ ।
समान्य रोजगारी दिने काम त मधुवन नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।
–पत्रकार प्रेम विश्वकर्माको सहयोगमा यो अन्र्तवार्ता तयार पारिएको हो । ०६ असार २०७६